Justine Greening oo la kulantay Soomaalida - BBC Somali - Warar
Justine Greening oo la kulantay Soomaalida
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 Abriil, 2013, 19:59 GMT 22:59 SGA
Justine Greening, Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ah ee UK oo u warramaysa Farxaan Maxamed Jimcaale
Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ee Britain, Justine Greening ayaa sheegtay in taageerada bulshada British-ka ee Soomaalida ay muhiim u tahay in Soomaaliya ay ka soo kabato labaatan sano oo dagaal ah.
Justine Greening oo ka hadlay kulan ay maanta magaalada London kula yeelatay bulshada Soomaalida qaar ka mid ah, oo ay ka dhageysanaysay fikradahooda ku aadan Soomaaliya, ayaa waxa ay sheegtay in Soomaalida Britain ay xiriir wanaagsan ay la leeyihiin qoysaskooda iyo saaxiibadooda jooga Soomaaliya.
Waxa ay sheegtay in dadaalka horumarinta ee ay waddo dowladda Britain ay ku maalgelinayso nada iyo fursado si ay Soomaalidu dib ugu dhisaan dalkooda.
Waxa ay sheegtay in ay doonayaan inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya.
Britain waxa ay balan-qaadday in ay ku bixiso £80 sanadkan iyo kan xiga si wax looga qabto waxyaabaha sababay gaajada iyo dagaalka Soomaaliya.
Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si wada jir ah u shir guddoomin doona shir caalami ah oo ka dhacaya London, kaasi oo ah sidii taageero caalami ah loo siin lahaa Soomaaliya.